🥇 ▷ Huawei Mate 30 RS Porsche Design ayaa sidoo kale lagu socdaa ✅
Huawei Mate 30 RS Porsche Design ayaa sidoo kale lagu socdaa
Imaatinka aaladda ayaa waxaa ku dhawaaqay Maamulaha Guud ee Huawei Richard Yu, waxaana rajeyneynaa inay ka duwanaan doonto walaalaheeda kale.
Huawei ayaa soo saari doonta taxaneheeda Mate 30 taxane isbuucaan. Waxaan fileynaa uguyaraan Huawei Mate 30 iyo Mate 30 Pro, laakiin waxaa jira taleefanka seddexaad wadada – the Huawei Mate 30 RS Porsche Design. Imaatinka aaladda ayaa waxaa ku dhawaaqay Maamulaha Guud ee Huawei Richard Yu, waxaana rajeyneynaa inay ka duwanaan doonto walaalaheeda kale. Muuqaalka gaaban ee sideed iyo labaad wuxuu soo jeedinayaa inaan filayno gole dambe oo leh walxo naqshad toosan. Waxaan sidoo kale aragnaa jarjar dhuuban, taasoo la micno ah in khadka kamaradda gadaal u egyahay yeelan doono qaab ka duwan qaabeynta wareegsan ee laga filayo noocyada kale.
Maaha wax aan caadi aheyn in Porsche aaladaha loo adeegsado ay kaga duwan yihiin taleefannada kale ee Huawei. Huawei Mate RS Porsche Design wuxuu la yimid kamarad sadex geesood ah oo ku taal bartamaha, in kasta oo ay la timid qoyska P20, oo dhinacooda leh dareemayaal. Mate 10 ayaa kaamirooyinka isku si isku mid ah ugu xirnaa, laakiin aaladda naqshadeynta safka hore waxaa lagu bedelay koox toosan oo leh astaanta ‘Porsche Design’.
Marka laga hadlayo waxyaabaha gaarka ah, waxba kama ogin taleefanka. Kaliya waxaan qiyaasi karnaa inay lahaan doonto Kirin 990 chipset, 12 GB oo RAM ah iyo ilaa 512 GB oo kayd ah – ama ilaa 1 TB. Sikastaba, aaladda casriga ah ee ‘Porsche Design’ waxaa loogu talagalay macaamiisha doonaya inay soo bandhigaan hantidooda, taas oo macnaheedu yahay in astaanta aaladda ay ka muhiimsan tahay waxa gudaha ka dhacaya.
Font (Af Shiine)
Xamaasad tikniyoolajiyadeed ,,, Xayeysiinta, Suuq geynta Dijital ah, Meelaha istaraatiijiyadeed, iyo dabcan Android